असार २० भित्र एसइईको नम्बर पठाउनुपर्ने, परीक्षा नभए पनि केन्द्राध्यक्षलाई दुई दिनको भत्ता! :: Setopati
असार २० भित्र एसइईको नम्बर पठाउनुपर्ने, परीक्षा नभए पनि केन्द्राध्यक्षलाई दुई दिनको भत्ता!
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार १६
कार्यविधिको अनुसूची २ मा भएको समष्टिगत फाराम मात्र प्रयोग गरी विद्यार्थीको अन्तिम मूल्यांकन विवरण तयार गर्न बोर्डले विद्यालयहरूलाई आग्रह गरेको छ।
विद्यार्थीलाई आन्तरिक तवरबाट मूल्यांकन गरी नम्बर दिन प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा विद्यालयमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्छ।
विद्यालयहरूबाट प्राप्त भएको प्राप्ताङ्क विवरण र मूल्यांकन समितिबाट प्रमाणित गरी पठाइएका प्राप्ताङ्क, तालिका (मार्क लेजर) भिडाई प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक अंक भरे/नभरेको, पूर्णाङ्क मिले/नमिलेको लगायत रूजु गरेर जिल्लास्थित समन्वय इकाइलाई असार ३० गतेभित्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउन बोर्डले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयले फिर्ता माग्यो पेश्की रकम
एसइई परीक्षा नहुने भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षा व्यवस्थापनका लागि पठाएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बालकृष्ण सिंखडाले गत शुक्रबार सातै प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै पेश्की रकम फिर्ता गर्न भनेका हुन्।
मन्त्रालयले प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत् जिल्ला र केन्द्रहरूमा परीक्षा व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराएको थियो।
प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा परीक्षा सञ्चालन खर्च एक साताभित्र फिर्ता गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्षहरूले बढीमा दुई दिनको भत्ता लिन पाउने मन्त्रालयले पठाएको परिपत्रमा उल्लेख छ।
तर भत्ताबापत कति रकम लिने भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन।
‘केन्द्रका केन्द्राध्यक्षले आफ्नो र सहायक केन्द्राध्यक्षको बढीमा दुई दिनको भत्ता, आन्तरिक ढुवानी, अस्थायी शौचालय निर्माण, स्टेशनरी र विविध खर्च शीर्षकमा खर्च भएको भए सो को बिल भरपाई साथ बाँकी रकम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको खातामा जम्मा गरी सात दिनभित्र पेश्की फर्स्यौट गर्ने,’ मन्त्रालयकाे परिपत्रमा उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले एसइई नै नभएकोले पेश्की रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। ‘केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्षले बढीमा दुई दिनको भत्ता लिन सक्छन्,’ शर्माले सेतोपाटीसँग भने।
एसइई परीक्षा सुरू हुनु एक दिनअघि सरकारले परीक्षा स्थगित गरेको थियो। परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापनका सबै काम सकिएका थिए। यस्तै मन्त्रालयले एसइई परीक्षाका प्रश्नपत्र तथा कक्षा १२ का प्रश्नपत्र पनि सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको छ।